Folarin Balogun Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Folarin Balogun Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Folarin Balogun bu ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka ha buru, ndu na ndu nke onwe.
Ọ bụ nkọwa dị mkpirikpi nke njem ndụ ndị egwuregwu bọọlụ, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, chọpụta oge ọ bụ nwata ka ọ gaa na ebe ngosi ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke Folarin Balogun's Bio.
Nbilite nke Folarin Balogun.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime atụmanya na-akpali akpali na North London. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Life nke Gunmụaka Na-eto Eto: Folarin Balogun. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Folarin Balogun Nwatakiri Akuko:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha "Balogunner". Folarin Jerry Balogun a mụrụ na ụbọchị nke atọ nke Julaị 3 na Obodo New York na United States. Amụrụ ya nye ndị nne na nna na-abụghị ndị America.
Folarin Balogun Family malitere:
A mụrụ nne na nna na-aga n'ihu na Nigeria. Ọzọkwa, nchọpụta e mere iji chọpụta ezinụlọ ya sitere na-egosi na papa ya na mama ha si n'ebe ọdịda anyanwụ Nigeria. N'ụzọ na-akpali mmasị, ha bụ ndị agbụrụ Yoruba na-asụ, nke bụ otu n'ime agbụrụ atọ kachasị na mba West Africa.
Ọ bụ ezie na a mụrụ Folarin n’obodo na-anaghị ehi ụra, ọ nọrọ ọtụtụ n’oge ọ bụ nwata na-eto eto na England. Ndị mụrụ ya hapụrụ States mgbe ọ dị nanị afọ abụọ wee mee ụlọ ọhụrụ ha na London ebe Folarin tolitere na-ahụ n'anya football.
Nwa anyị nwoke toro na London.
Ezigbo ezinụlọ Folarin Balogun:
Balogunner nwere ezigbo ụgbọ mmiri site na nwata, n'ihi na ndị nne na nna chọrọ ihe kacha mma maka ya. Mmasị ha ịnọ na mba ụwa mepere emepe karịa ka England na-agba akaebe banyere ịba ụba ego na atụmatụ maka ọdịnihu nwa ha.
Folarin Balogun Football Akụkọ:
Otu n'ime atụmatụ ndị nne na nna onye egwu ahụ nwere bụ idebanye aha ya na ụlọ akwụkwọ mmuta. Mgbe ha chọpụtara na ọ nwere mmasị na atụmanya ya, ha chere na ọ ga-aga nke ọma dị ka onye egwuregwu.
N'ihi ya, e kwere ka ọ kpọọ maka Sunday League n'akụkụ Aldersbrook. N'ihi ya, ọ malitere nzọụkwụ mbụ ya na asọmpi egwuregwu.
Ka ọ na-erule oge nwatakịrị ahụ dị afọ 10, Arsenal hụrụ ya mgbe ọ na-egwu Aldersbrook. Ugwu London nke dị n'ebe ugwu kpaliri ịbanye ngwa ngwa tupu ndị iro ya ga-enweta ya.
“Mgbe m na-anwale ule m na Arsenal, mụ na Tottenham nọ na-akpọtụrụ ma ọ bụrụ na ihe aga South. N'ụzọ dị mma, ndị Gunners bịanyere aka na m. Enwere m obi ụtọ na ọ bụ otu n'ime oge ndụ m pụrụ iche.
Foto nke onye na-eti ihe 6 afọ mgbe ọ banyere Arsenal.
Folarin Balogun Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Bụ onye na-agba egbe bụ ihe nwatakịrị na-atụ anya ya. Ya mere, ọ mere ike ya niile iji hụ na ọ biri n'akụkụ ọ bụla nke nrọ ahụ na-agụnye ịrị elu na-aga n'ihu site na klọb.
N'oge elu nke ịrị elu ya, Balogun ghọrọ onye ama ama dịka igwe na-atụ egwu. Ọ malitere na-atụnyere ndị otu egwuregwu aha mbụ Pierre-Emerick Aubameyang wee nweta nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na February 2019.
Hụ onye nwetara nkwekọrịta ọrụ aka ya na 2019.
Folarin Balogun Biography - Nbilite:
Mgbe ọ malitere na mbụ na mmeri 3-0 nke Arsenal na Dundalk na Ọktọba, Balogun nwere obi ụtọ na ọ mezuru nrọ nwata.
Ọ bụ ezie na o nyeghị akara, o kwuru na mbido ya bụ “nwa mgbe m na-eche. ” Njem nwatakịrị ahụ na-agba bọl na-amalite ugbu a.
Ọ nọ na mmụọ dị elu tupu na mgbe ọmalitere.
Mụ na Aubameyang, Lacazette, na Nketiah N'ịgbado ahịa ha na London London North Club, Balogun ga-enwerịrị ọnọdụ ya na ndị otu egwuregwu.
Olileanya, o nwere echiche na-anwụ anwụ ma ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na ndị na-agba egbe ma ọ bụ otu ọ bụla ọzọ. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bụ Folarin Balogun Girlfriend and Wife ga-abụ?
Nwa anyị nwoke alụghị nwanyị n'oge ọ na-ede edemede a na akụkọ nwata yana akụkọ ndụ ya. Ya mere, ọ nwere ike iwe oke obere oge tupu anyị ahụ ya ka ọ na-egwupụta na ịma mma ọ bụla nke anyị nwere ike ịkpọ nke ya.
N'ịja mma, ọ na-elekwasị anya n'ịgbalị ịkwalite na ịzụlite ụzọ dị iche iche nke ịmecha. Nke ahụ bụ mkpebi amamihe dị na ya ma ọ bụrụ na ị jụọ anyị.
Ọnye na-bụ Folarin Balogun Girlfriend?
Ndụ ezinụlọ Folarin Balogun:
N'elu isi goolu nke mbụ ya na Arsenal megide Molde na November, e nwere ndị setịpụrụ ndị nwere obi ụtọ karịa maka ọganiihu.
Ha bụ ezinụlọ ya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Folarin Balogun. Ọzọkwa, anyị ga-eme ka eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya dị ebe a.
Banyere Folarin Balogun Ndị nne na nna:
Balogunners papa na mama abughi ihe di nkpa na ndu ya. Ha na-arụ ọrụ n'azụ ebe iji hụ na ọ gbadoro anya ma kwado onwe ya na Premier League.
N'iburu ọsọ nke Balogun na-emeziwanye, ọ gaghị ete aka tupu ndị mụrụ ya amalite ịjụ ajụjụ ọnụ banyere etu ha si zụlite ya ka ọ bụrụ ọrụ ịtụnanya.
Lucas Torreira Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Banyere ụmụnne nwanne Folarin Balogun:
Balogunner nwere ike bụrụ naanị nwa nne na nna ya mụrụ. O kwuteghị nwanna ọ bụla. O nweghikwa nwa agbogho / nwa agbogho o bula dika nwanne ya nwanyi. Hụla ụmụnne ya? Ọ dị mma ịgwa anyị na igbe igbe.
Banyere ndị Folarin Balogun:
Dị nnọọ ka ezinụlọ nke onye ọkpụkpọ ahụ, enweghị ndekọ banyere nne na nna ochie nke onye egwu ahụ. N'otu aka ahụ, ndị nne na nna ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya nwoke amaburu nke ọnwa Disemba 2020.
Folarin Balogun Ndụ Nke Onwe:
Isnye bụ nwa anyị nwoke karịa ịbụ onye maara ihe nke na-egwuri egwu n'ubu nke onye na-agbachitere ikpeazụ?
Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara onye ọ ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Ọ bụ onye nwere obi ụtọ na-enwe obi ụtọ na-enwe obi ụtọ bụ onye maara otú e si edozi oké ọchịchọ na àgwà ziri ezi.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu na ịmụmụ ọnụ ọchị, Balogun bụ onye ị ga-achọ inwe mkparịta ụka na-atọ ụtọ. Na mgbakwunye, ihu ọchị ya na-ebute ya ụzọ, ya mere ndị ya nwere nka. Ọ hụrụ ịrụ ọrụ na ịchọrọ ịmalite njem ntụrụndụ.
Ọzọkwa, njem na iso ezigbo ndị ezinụlọ na ndị enyi nọ na ndepụta nke mmasị na ihe omume ntụrụndụ ya.
Ọ bụghị ya bụ ihe niile ịchọrọ na onye na-eti ihe?
Folarin Balogun Web site:
Ego ole bụ nwa anyị nwoke na 2020? A na-enyocha nyocha akụ ya. Otú ọ dị, ọ bụ ihe nzuzo na-emeghe na ọ na-akpata about 4,532.72 kwa izu. Nwa nwoke dị afọ iri na itoolu ga-enwetara ikike ịnya ụgbọ ala iji kwaga onwe ya ọzụzụ na ụgbọ ala mara mma.
Na mgbakwunye, ọ nwere ike ị nweta ụlọ ma ọ bụ ụlọ mara mma maka onwe ya na ịkwụ ụgwọ dị otu a kwa izu. Na nchịkọta, ọ dịghị ihe na-egbochi Balogunner ibi ndụ okomoko belụsọ na ọ họrọghị.
Eziokwu Banyere Folarin Balogun:
Ekele, ị mere nke a. Iji mechie edemede a, lee ihe ndị ị kwesịrị ịma banyere nwatakịrị ahụ.
Eziokwu # 1 - rygwọ ọnwa na ego kwa nke abụọ:
Kwa Afọ: £ 235,664.
Ọnwa kwa: £ 19,638.
Kwa Izu: £ 4,532.
Kwa :bọchị: £ 647.
Kwa elekere: £ 22.
Nkeji nkeji: £ 0.37
Sekọnd: £ 0.007
Otu nwa akwukwo Ian Wright n'akwukwo nke oma
Kemgbe ị bidoro ilele nke Folarin Balogun Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2 - Okpukpe:
Folarin Jerry Balogun nwere ike buru ibu na okpukperechi ma obu na obughi. N’ezie, ọ na-ekpughere ihe ndị o kwenyere n’onwe ya egosighikwa onye ọ bụ onye Kraịst ma ọ bụ na ọ bụghị. Kaosinadị, oge ga-ekpughe ihe ọ pụtara n'ihi n'okwukwe.
Eziokwu # 3 - FIFA 2020 Fim:
Ọ dịbeghị mgbe ikpe na-ezighị ezi na-egbuke egbuke dịka ọ dị na ogo Balogun. Nwere ike were ya na ọ nwere ngụkọta akara nke 60 isi na-enwe ike nke 80?
O doro anya na ọ bụghị ngosipụta nke ike ya.
Nke ahụ ekwenyeghi egosiputa ikike dị adị nke nnukwu onye na - emecha ọrụ ma e jiri ya tụnyere ihe dị ka ya Youssoufa Moukoko. N'ụzọ dị mma, ọ bụ maka nkwalite na-atụle ọrụ ndị ọ na-eme n'oge na-adịbeghị anya.
Eziokwu # 4 - Ọrụ International:
You maara na Balogun ruru eru ịnọchite anya mba atọ? Ha bụ USA na England. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịnọchite anya Nigeria. Agbanyeghị, ọ ga - abụrịrị na ọ ga - anọchi anya ndị England n’ihi ohere na mma ọ ga - enye gị.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a banyere akụkọ nwata na akụkọ ndụ Folarin Balogun. Anyị nwere olile anya na ọ kpalitela gị ime ma kwụrụ maka ihe ị hụrụ n'anya. Dị nnọọ ka Balogun gbara mbọ sonye na Arsenal, otu ụlọ ọ hụrụ n'anya nke ukwuu.
Ruo ugbu a Balogun na-egwu egwu maka ndị Gunners, ọ ga-agbasi mbọ ike idebe ụgbọ elu hype na steam zuru n'ihu.
Ọ bụ ebe ọ hụrụ n'anya na a na-ahụ ya n'anya. Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna onye egwu ahụ nkwado maka ọrụ ya n'okwu na omume.
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'inye akụkọ nwata na akụkọ ndụ eziokwu nke Ndị egwuregwu bọọlụ si na Naịjirịa. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, ọ ga-adị mma ịhapụ okwu ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.
Folarin Balogun nke Wiki:
Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke ndị na - agba ọsọ ndụ, jiri nwayọ jiri tebụl anyị Wiki.
Aha zuru ezu: Folarin Jerry Balogun.
aha otutu: Balogunner.
Age: 20 afọ na ọnwa 3.
Ụbọchị ọmụmụ: Daybọchị atọ nke ọnwa Julaị 3.
Ebe amụrụ onye: Obodo New York dị na United States.
Ogo n'ogo: 5 Ugbo, 8 Inches.
Elu na Cm: 178.
Egwuregwu Ọnọdụ: Gaanụ.
Ndị nne na nna: NA NA
Nwa nwanyi: NA NA
Ihe omume: Ingga njem, ịga ije, iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge.
Ezigbo Net: N'okpuru Nyocha.
Albert Sambi Lokonga Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
William Saliba Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ